सावधान ! यसकारण खतरनाक छ ‘फेसएप’ - Gokarna News from Nepal
शनिबार, साउन ०४, २०७६ by Gokarna News
एजेन्सी– अहिले सोसल मिडियामा एउटा एपको प्रयोग गरी आफुलाई बुढो देखाउने होडबाजी नै चलिरहेको छ । विश्वभर नै फेस एपले तहल्का मच्चाइरहेको छ । सोसल मिडियामा फेसएपका तस्वीर अन्धाधुन्ध पोष्ट भैरहेका छन् । यो एपले कुनैपनि व्यक्तिको तस्वीरलाई कृत्रिम तरिकाले बुढो मानिसको अनुहारको रुपमा बदलिदिन्छ ।
अमेरिकी अन्यायपूर्ण प्रतिबन्धप्रति हुवावेले जनायो आपत्ति
चन्द्रयान–२ सफलता पूर्वक चन्द्रमाको कक्षमा प्रवेश
समयसीमा भित्र बक्यौता रकम नतिरेका कारण सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइटको लाइसेन्स खारेज
गुगल म्यापलाई चुनौति दिदै हुवावेद्वारा म्यापिङ सर्भिस सञ्चालनको तयारी
प्रियंका र दीपिकाका सबैभन्दा धेरै ‘फेक’ फलोअर्स !
सीडीओले संघ र प्रदेश दुवै सरकारको मातहतमा रहेर काम गर्नुपर्ने